3D rayidka, naqshadeynta waddada, casharka 1 - Geofumadas
3D madani, naqshad jidka, cashar 1
Waxaan ka heli karaa codsi ka socda saaxiibka jooga waddanka patepluma ee ka shaqeynaya waddo weyn; Sida muuqata wuxuu leeyahay Land Desktop si aan u tagno wax yar ka dibna waxa aan haysto 3D 2008 laakiin yaa daryeela? Just for nostalgia, tani waxay ahayd mid sahlan in CivilSoft (Autocivil oo markii hore ka shaqeyn jirtay dibadda AutoCAD iyo abuuray DXF faylasha), kadibna wuxuu yimid Softdesk iyo hadda 3D.
Qaadista wadada, kaas oo aad leedahay xariiqda isbaarada iyo qaybaha kala geddisan ee dhinaca bidix iyo midig ee xarun kasta ee mitir kasta 10. Casharkan waxaan arki doonaa sida dhibcaha loo soo dhoofiyo.
Ugu horreyntii waxaan xogtaada ku lahaa xariiq faaruq ah, aragtida dhinaca bidix iyo midigba. Si kastaba ha ahaatee, weydii qof inuu kuugu soo diro template wanaagsan halkaas oo aad gali kartid macluumaadkaas adigoon jiidin lugta. Sidaa darteed waxaan ka qaadi doonaa marxaladan kor ku xusan, sababtoo ah buug yar oo ah qoraalka Excel ee feylka leh dhibcaha ayaa imaanaya.
Si kastaba ha noqotee, halkan ayaan kaa tagayaa faylka si loo jabiyo qumbaha si loo arko sida ay u shaqeyso, waxaanan xoogga saari doonaa shaqada laga bilaabo saldhigga hoose.
Marka hore, marka hore:
Sawir cusub Waxaan dooneynaa in aan bilawno sawir cusub, sababtoo ah waxaan sameyneynaa "faylka, cusub" waxaanan dooranaynaa template "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS Base.dwt". Tani waa si loo hubiyo in faylka abuurku uu ku jiro cutubyada iyo kuwa aan Ingiriisiga ahayn.
Hagaajinta sawirka. Xasuuso in sawirkeena uu yahay dwg fudud oo aan lahayn qiyaasid ama nidaam iskudubarid ah, si aad taas u sameyso waxaad ku heli kartaa oo keliya mashiinka AutoCAD ama 3D madani. Tani, waxaan sameynaa "khariidad / qalab / qeexaan Nidaamka Isku-xirka Caalamiga ah" ama la socota "_ADEDEFCRDSYS"
Halkaas ayaan ka dooran doonaa Qaybta, UTM WGS84 Datum iyo ka dibna 16 North zone.
Qodobaha dibedda laga keeno
Si aad u soo dhisto qodobbada, waxaan dhoofiyay faylka Excel, halkaa oo ah miiska wadaagga ee qaabka csv oo loo yaqaan geofumadasxport.csv, halkan Waxaad soo dejisan kartaa haddii ay doonayaan inay sameeyaan.
Xulo qaabka Sidaa daraadeed waxa soo socda, waa naqshad sahlan oo laga soo dejiyo AutoCAD, taas oo aan sameyno "Tilmaamayaasha / Qodobbada Dhoofinta / Qodobbada Dibedda" ama leh amar "_importpoints" oo halkaanna waxaan ka dooranaynaa qaabka nagu habboon:
Amarka qodobbadu waa:
Sidaa daraadeed waxaan doorannaa, PENZD, oo leh qaabka la jajabiyay (csv), waxaan doorannaa faylka waxaanan qeexaynaa in dhammaan qodobada ay aadi doonaan koox la yiraahdo "sb_all".
Kala sooc la'aan Ka dibna waanu aragnaa aragti si aan u aragno dhibcooyinka.
Tani waa in la abuuray, mesh ee dhibcood, iyo guddiga dhinaca, "tabaha" tabaha, liiska dhibcaha loo yaqaan "sb_all" waa in la abuuray.
Haddii ay soo baxdo sida sare u kacsan, waxay noqon kartaa inaad ku wareersan tahay PENZD oo leh PNEZD, waxaad tirtirtaa oo aad mar kale soo dhoofisaa.
Haddii aadan helin isla cabirka qoraalka, ha dareen bixin, waa arrin qaab.
Qaybta soo socota waxaan arki doonaa sida leysugu cadeeyo qodobada si aad u aragto si ka duwan ... Waxaan rajeynayaa inaan heysto wakhti.
3D Dwg egeomates My
Post Previous«Previous Khariidado waawayn oo qariib ah
Post Next 3D madani, naqshad jidka, cashar 2Next »
13 Jawaab "3D madani ah, naqshad waddo, cashar 1"
Nofeembar, 2016 at
Haddii aysan sidan u muuqan, waxaad si toos ah u sameyn kartaa, adigoo ka tagaya isbedelka soo socda ee xulashada xalka:
«C: \_ faylasha Barnaamijka \_ AutoCAD Civil 3D 2011 \_ acad.exe» / ld «C: \_ faylasha Barnaamijka \_ AutoCAD Civil 3D 20111 \_ AecBase.dbx» / p «<c >> »
iyo ikhtiyaarka u bilawda:
«C: \_ faylasha Barnaamijka \_ AutoCAD Civil 3D 2011 \_ UserDataCache \_»
ama waddada barnaamijkaaga
Waxaad samayn kartaa markaad bilowdo barnaamijka:
Bilow, dhammaan barnaamijyada, AutoDesk, AutoDesk Civil 3D 2011
Waxaa jira muuqaal ikhtiyaari ah oo lagu bilaabi karo cutubyada ama Ingiriisiga.
Ender Bustamante isagu wuxuu leeyahay:
fiid wanaagsan, waxaan doonayaa in aan warbixin muhiim ah. Waxaan ku rakibtay iyo autocad sokeeye 3d 2011 ma heli hab si sawir of Imperial u qaaddo si ton tan iyo bilowgii, sidaas darteed in model meel aad ka arki kartaa miisaanka ton. Thanks antamano.
AutosEnventa isagu wuxuu leeyahay:
waad mahadsan tihiin, waan sugi doonaa
horay u sii soco kuwa ay tiknoolajiyada nagu soo jiidato inkastoo ay naga dhigeen da'da dhagaxa
Saaxiib salaan saalax, si xun aad u gartay koorsada goor dambe. Marka xigta waan kula soo socodsiin doonnaa.
waana ku mahadsan tahay sida aad ugu biirisay jaahilnimada oo annaga maalinba aan dooneynno inaan wax baranno, tabaruc qiimo leh waxaan rajeynayaa inaan la socdo
armando isagu wuxuu leeyahay:
hello sida aad ugu fiicneyd waxaan helay wax wax u mahadnaqay wax walbana ay sii wadaan
Rina isagu wuxuu leeyahay:
Tababar wanaagsan oo rayid ah 3d ... Waxaan ka baxaa dhibaato
Tani waa nolosha saaxiibka Ray, way adag tahay in lala socdo qof kasta.
RAYMUNDO isagu wuxuu leeyahay:
RUUXU KU SAABSAN NOLOSHADA NOLOSHA OO LAGU DHAMAYSTIRAY MACLUUMAADKA WAAJIBAADKA QAYBTA LABAAD QAYBTA UU SAMEEYAHAY MAHADSANIDNIMADA KHUDBADU SAMEEYEY.
ALI isagu wuxuu leeyahay:
Muuqaal wanaagsan oo ku saabsan dhammaan dhinacyada.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad